यो न्युज टु नेपाल एप्प को मुख्य उद्देश्य के हो ?
उत्तर : न्युज टु नेपाल एप्प को मुख्य उद्देश्य, स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना जगाउनु, विभिन्न रोगहरुको बारेमा हामीले जाने र सके अनुसार को ज्ञान दिनु , विज्ञान तर्फ हेर्ने हो भने हामिले सधैं गरि आएको तर ख्याल नगरिएको वा कारण थाहा नभएको कुनै पनि वा विभिन्न विषय वस्तुहरुको बारेमा ध्यान केन्द्रित गराई सहि जानकारी प्रदान गर्नु साथै रुढिवादी वा गलत भनाइहरु वा गलत विश्वास गरिएको कुनै पनि कुराहरू को सहि जानकारी प्रदान गर्नु हो ।
यो एप्पमा कसरी मेम्बर बन्ने ?
के यो एप मा दैनिक जानकारीहरु पोस्ट हुन्छन ?
के नया पोस्ट पढ्न फेरि एप्प अपडेट गर्नु पर्छ ?
के Users ले पनि यो एप्प मा पोस्टगर्न पाउँछन् ?